Bazoncela kocula owokholo abeza koweSolezwe | IOL Isolezwe
Bazoncela kocula owokholo abeza koweSolezwe
Isolezwe / 16 August 2012, 1:32pm /
u-TENDER Mavundla ozobe enandisa ePort Shepstone emcimbini iNtandokazi Womens Club ehlelwa yiSolezwe Isithombe: SITHUNYELWE
IBAFANISA nabantu abasenhlahleni abesifazane abazoza emcimbini weNtandokazi intokazi ezobe ikulo mcimbi ezobe iqhulula amanoni ayo njengoba isine-albhamu entsha yomculo wokholo.
UTender Mavundla owazakhela udumo emncintiswaneni wama-Idols, uzobe ephakathi kwabesifazane abazobe bekulo mcimbi ozoba ngo-Agasti 25 ehhotela iKapenta Bay, ePort Shepstone.
Lo mcimbi ohlelwa yiSolezwe, iNtandokazi Woman’s Club uzobe uhambisana nemigubho njengoba iningi labantu besifazane lizobe lithokozela ukuhlonishwa kwalo ngamagalelo elinawo neliwakhombisa ngokwehlukana empilweni yabantu.
Ngokusho kukaTender, ziningi izinto asedlule kuzona empilweni angathanda ukuthi azidlulisele kwabesifazane kulo mcimbi.
“Izinto esengidlule kuzona zingenza ngikuthole kulula ukukhuluma ngazo futhi ngingafihli. Abantu besifazane abazoba kulo mcimbi ngithi kubona bafana nabanenhlahla kakhulu ngoba kuningi engizobavulela khona okusesifubeni sami,” kusho uTender.
Uthe usehlangana nabantu abahlukene abanezinkinga ukuze abakhuthaze kunoma yiziphi izimo ababhekene nazo.
Kulo mcimbi okungowesithathu kulo nyaka leli phephandaba ligubha ngawo iminyaka elishumi, owesifazane oyedwa uzohamba ebusisekile futhi engazisoli ngokuza kulo mcimbi ngoba uzohamba nesipho sosofa bakwa-Geen & Richards besikhumba benani lika- R17 000.
Ngokusho kukaZandile Nembe weSolezwe, amathikithi asephelile futhi nabebebekise izihlalo abangakakhokhi abangabe besazihlupha ngoba konke sekuphothuliwe.
Lo mcimbi okungenwa kuwona ngo-R150 uzoqala ngo-10 ekuseni kanti uhlelo luzophathwa nguThokozani MaMkhize Ndlovu owake waba ngumsakazi woKhozi FM.
Kubaxhasi kubalwa iThala, Hallmark, Spekko Rice, Inecto noMnyango wezoBulungiswa.